War Deg deg Ah: Wasiirki Ugu Dhaqanka Xuma Xukuumadda Siilaanyo Ee Gabadha Afka Ka Jaqay Oo Ku Biirayah Xisbiga Waddani Oo Iska Casilay Xisbiga Kulmiye - Wargane News
Home Somali News War Deg deg Ah: Wasiirki Ugu Dhaqanka Xuma Xukuumadda Siilaanyo Ee Gabadha...
War Deg deg Ah: Wasiirki Ugu Dhaqanka Xuma Xukuumadda Siilaanyo Ee Gabadha Afka Ka Jaqay Oo Ku Biirayah Xisbiga Waddani Oo Iska Casilay Xisbiga Kulmiye
Wasiirkii hore ee Xidhiidhka Golayaasha Cali Xaamud Jibriil oo ka mid ahaa Guddiga Ololaha doorashada Madaxtooyada Xisbiga Kulmiye ee gobolka Awdal, ayaa sheegay inuu iska casilay Xubinnimadii Guddigaas oo uu Sabtidii dorraad Musharrax Muuse Biixi Magacaabay, isla markaanna uu Taageerayaashiisa kala tashan doono halka uu masiirkooda siyaasadeed u hoggaamin doono.
Cali Xaamud oo khadka telefoonka kula soo xidhiidhay Wargeyska Ogaal shalay gelinkii dambe, wuxuu sheegay in sababta uu uga baxay Guddigaasi ay daarran tahay Danihiisa Shakhsiga ah ee siyaasadeed. “Maanta (shalay) oo taariikhdu tahay (ahayd) 01.10.2017, waxaan halkan ka caddaynayaa in aan iska casilay Guddiga kaambaynka Kulmiye ee gobolka Awdal.” ayuu yidhi Cali Xaamud.
Mar aannu sii weydiinat inuu gebi ahaanba ka baxay Xisbiga Kulmiye iyo in kale, wuxuu sheegay inuu marka hore la tashan doono taageerayaashiisa, isla markaana uu gadaal ka sheegi doono Sahanka Masiirkiisa siyaasadeed halka uu salka dhigi doono.
Cali Xaamud Jibriil tagtadii dhawayd waxa laga qaaday xil Wasiirnimo oo uu ka hayay Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo, isla markaana wuxuu haatan banneeyay Xubinnimaddii Guddigaas Ololaha Kulmiye. Wixii ka dambeeyay waqtigaa xilka Wasiirnimo laga qaaday illaa hadda waxa la tilmaamayaa in Cali Xaamud ku jirro dhaqdhaqaaq uu ku muujinayo awooddiisa siyaasadeed iyo cudduda taageerayaashiisa. Cali Xaamud wuxuu hore u ahaa Gacanta Midig ee Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan-Saylici, isla markaana waxa lagu tilmaamaa Olole-yahan aan fadhiisan oo kicinta iyo abaabulka aad ugu xeel-dheer.
Geesta kale, Guddiyada Xisbiga Kulmiye ee Ololaha doorashada ee gobollada Maroodi-jeex, Saaxil, Awdal iyo Togdheer oo uu soo saaray Gufdoomiyaha Xisbigaas Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa xogo Wargeyska Ogaal soo gaadhay tilmaamayaan in ay saamayn taban iyo mid toganba ku yeesheen Xisbiga dhexdiisa. Qaar ka tirsan Xubnaha Kulmiye u magacaabay Kaambaynka doorashada ee gobolladaas, ayaa la tilmaamay inay khilaaafsan yihiin Digreetadii uu Madaxweynuhu isla Sabtidii dorraad soo saaray.
Sidoo kale, Marwo Aamina-Saado oo ka mid ahayd Xubnaha Guddiga ololaha doorashada Xisbiga Kulmiye ee gobolka Togdheer, ayaa iyaduna shalay sheegtay inay iska casishay xilkaas Guddoomiyaha Kulmiye u magacaabay Sabtidii. Waxa kale oo jira Warar sheegaya inay jiri karaan Xubno kale oo iyaguna iska casili doona xilalkaas olole ee Kulmiye looga magacaabay oo aan ku qanacsanayn ama saluugsan, balse hadda labadaas Xubnood ee Awdal iyo Togdheer, ayaa si rasmi ah u shaaciyey is-casilaaddooda.